पति शोकको पीडा भुल्दै ‘बिना’ ! ‘शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्दै निर्वाचनमा’ - आयो खबर
पति शोकको पीडा भुल्दै ‘बिना’ ! ‘शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्दै निर्वाचनमा’
२०७४ मंसिर १५ प्रकाशित ११:५९
मंसिर १५, कञ्चनपुर ।
वाम गठबन्धन कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ की उम्मेदवार बिना मगर कञ्चनपुर फर्के लगत्तै निर्वाचन अभियानमा जुटेकी छ्नि ।
पति शोकमा परेकी बिना शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्दै निर्वाचनमा जुटेकी हुन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का लालझाँडी, पुर्नवास, बेलौरी र बेल्डाँडीका गाउँबस्तीमा बस्ती भेटघाट, भेला, घरदैलो चुनावी अभियानमा खटिएकी छिन् ।
विपक्षीले आफु शोकमा परेका बेला नानाथरीका अफवाह फैलाउदै बिना कमजोर भएको प्रपोगाण्डा फैलाएको बताउँनै जनताले आफुलाई कमजोर बनाउन नदिने बताईन् । आफुसँग अब केही विकल्प नभएको बताउँदै बिनाले जनता बाहेक मेरो कुनै विकल्प नभएको स्पष्ट पारिन् । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको विकास, सम्बद्धि र रोजगारीका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको औल्याइन् । वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले यस क्षेत्रको बेरोजगारी र गरिबी अन्त्यका लागि औद्योगिक क्षेत्र बिस्तार गर्ने योजना अघि सारेको समेत बताए ।
बषौंदेखि आरक्ष पीडित, किसानले लालपुर्जा नपाएको समस्या, यस क्षेत्रका सडकलाई हिलो र धुलोमुक्त गर्ने आफ्नो योजना रहेको समेत बिनाले बताईन् । जितेर गएमात्रै यहाँको विकासका लागि सिहदरबारसँग लड्न सकिने उनले बताइन् । दक्षिणी क्षेत्रका महिलाको क्षमता अभिबृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउने हरेक कार्यक्रमसमेत ल्याउने उनले बाचा गरिन् । सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि समेत पहल गरेर आफ्नो मातृभूमि रक्षा गर्नुपर्ने उनले अर्को योजना अघि सारिन् । बिना शोकमा परेका कारण एकै कार्यक्रममा धेरै बोल्न सकेकी छैनन् । उनले दक्षिणी क्षेत्रका मतदातासँग हात जोड्दै आफ्ना आशाका केन्द्र तपाई नै हो बिनालाई साथ दिनुहोस, भन्दै भोट मागिरहेकी छिन् ।
प्रकाशित | २०७४ मंसिर १५ प्रकाशित ११:५९
किसानलाई परिचयत्र र त्यसैका आधारमा अनुदान, बिउबिजन र सुविधा वितरण गर्ने तयारी
गीतकार तारा अधिकारीको ‘पराईको सिन्दुर’ बोलको गीत सार्वजनिक